Xabad joojinta Yemen oo laga cabsi qabo in ay burburto - BBC News Somali
Xabad joojinta Yemen oo laga cabsi qabo in ay burburto
17 Disembar 2015
Isbahaysiga uu horkacayo waddanka Sucuudiga ayaa waxa uu ka digay in xabad joojinta ku meel gaarka ah ee ay la galeen fallaagada Xuutiyiinta ee gudaha dalka Yemen ay burburi karto wakhti kasta.
Hadalkan ayaa yimid kaddib markii labada dhinac ay billaabeen in ay is-dhaafsadaan maxaabiis boqolaal ah, arrintaasi oo lagu taageerayo wadahadalada nabadda ee ay Qaramada Midoobay maalgalisay ee billowday Talaadadii.
Is-dhaafsiga maxaabiista ayaa ah tallaabada kaliya ee lagu dhisi karo kalsooni, taasi oo ilaa iyo haatan u muuqata in ay baritaartay wadahadalada ka soconaya magaalada Geneva.
Dadaalada nabadda ayaa aad ugu baahan tallaabakasta oo wanaagsan si sare loogu qaado rajada lagu gaari karo horumar dhab ah. Hasayeeshee xaaladda ka taagan gudaha dalka ayaanan wax raja ah ka soo naasa caddeyn.
Xitaa isdhaafsiga maxaabiista ma aanu gaarsiisnayn waxa uu Sucuudigu dalbanayay. Xilli xabad joojinta maalinta jirsatay la iska indhatiray dhowr meelood gaar ahaan meelaha furunta ah iyo goobo ku xeeran magaalada Taacis.
Dhinackastana kan kale ayuu ku eedeeyay xabad joojinta, halka afhayeenka milateriga Sucuudiga uu ku eedeeyay fallaagada inay fuliyeen ku dhawaad 150 xadgudub.